နျူ-ဆူလ်တန်မြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
ထိပ်မှ: နျူ-ဆူလ်တန်မြို့လယ်၊ အီရှင်းမ်မြစ်
ကာဇက်စတန်နိုင်ငံရှိ နျူလ်-ဆူလ်တန်မြို့၏ တည်နေရာ
ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ၏ မြေပုံကို ပြသရန်
ကိုဩဒိနိတ်: 51°10′N 71°26′E﻿ / ﻿51.167°N 71.433°E﻿ / 51.167; 71.433ကိုဩဒိနိတ်: 51°10′N 71°26′E﻿ / ﻿51.167°N 71.433°E﻿ / 51.167; 71.433
၈၁၀.၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၃၁၂.၈ စတုရန်းမိုင်)
၃၄၇ မီတာ (၁၁၃၈ ပေ)
လူဦးရေ (၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၁ ရက်)
နျူ-ဆူလ်တန်မြို့(/ˌnʊərsʊlˈtɑːn/; တမ်းပလိတ်:IPA-kk; တမ်းပလိတ်:Lang-kz), ယခင် Akmolinsk (ရုရှား: Акмолинск, romanized: Akmolinsk), Tselinograd, နှင့် Astana[မှတ်စု ၁] (တမ်းပလိတ်:IPA-kk, တမ်းပလိတ်:Lang-cyrl)သည် ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဖြစ်သည်။ မြို့တော်၏ လက်ရှိအမည်ကို ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ၏ ပါလီမန်မှ တညီတညွှတ်တည်းထောက်ခံမှုဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအမည်မှာ ယခင်ကာဇက်သမ္မတဟောင်းဖြစ်သော နျူ-ဆူလ်တန် နာဇာရ်ဘာယဲ့ဗ်အား အစွဲပြု၍ ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
မြို့တော်သည် အီရှင်းမ်မြစ်ကမ်းဘေး ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ၏ မြောက်ဘက်အလယ်ပိုင်းဒေသ အာ့ခ်မိုလာဒေသကြီးတွင် တည်ရှိပြီး အထူးအခြေအနေအရ မြို့တော်အား ဒေသ၏ ကျန်သောအစိတ်အပိုင်းသီခြားခွဲ၍ အုပ်ချုပ်မှုပြုသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်များအရ မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း လူဦးရေ ၁.၁၃၆.၀၀၈ ဦးရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး ၁၉၉၇ ခုနှစ်ထိ မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့သော အာမာတီမြို့ပြီးလျှင် နိုင်ငံ၏ ဒုတိယမြောက်အကြီးဆုံးသော မြို့ဖြစ်၍လာခဲ့သည်။ ဤမြို့မှာ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဖြစ်လာခဲ့ခဲ့ချိန်မှစ၍ စီးပွားရေးအရ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး အလယ်အာရှဒေသရှိ ခေတ်မီဆုံးသော မြို့တော်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်၍လာခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် နျူ-ဆူလ်တန်မြို့သည် ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ၏ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ခရီးသွားနေရာများ ထိပ်ဆုံး ၁၀ ခုမှ ၁ ခုအဖြစ် အရွေးချယ်ခံရသည်။
ခေတ်မှီမြို့ပြဖြစ်သော နျူ-ဆူလ်တန်မြို့သည် အခြားသော အကွက်ချထားသော မြို့များကဲ့သို့ပင် အကွက်ချထားသော မြို့ဖြစ်သည်။ ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဖြစ်သွားပြီးနောက် မြို့တော်၏ အသွင်အဏ္ဍာန်မှာ အံ့ဩဖွယ် ပြောင်းလဲ၍ သွားခဲ့သည်။ မြို့တော်အကွက်ချစီမံကိန်းကို ဂျပန် ဗိသုကာပညာရှင် ကီရှိုကူရိုကာဝါမှ ရေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ၏ အစိုးရအဖွဲ့ ရုံးစိုက်ရာနေရာဖြစ်သောကြောင့် နျူ-ဆူလ်တန်မြို့တွင် ပါလီမန်အဆောက်ဦ၊ တရားရုံးချုပ်၊ အာ့ခ် အောဒါသမ္မတနန်းတော်နှင့် များစွာသော အစိုးရဌာနနှင့် အေဂျင်စီများတည်ရှိသည်။ မြို့တော်သည် မိုးမျှော်အဆောက်အဦများကဲ့သို့သော အစဉ်အလာမှခွဲထွက်၍ ခေတ်ဆန်သော အဆောက်အဦးများတည်ရှိရာ နေရာဌာနဖြစ်သည်။
↑ /əˈstɑːnə/, also US: /æˈ-, ɑːstɑːˈnɑː/, UK: /æˈstænə/.
↑ Pospelov 1993, pp. 24–25.
↑ ၃.၀ ၃.၁ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named stat.gov.kz
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named informburo
↑ Postal Code for Astana, Kazakhstan။ Postal Codes Database။
↑ Kazakhstan Country Codes။ CountryCallingCodes.com။
↑ ISO Subentity Codes for Kazakhstan။ GeoNames.org။
↑ ၈.၀ ၈.၁ Nursultan။ Merriam-Webster Dictionary။ 13 May 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Astana။ Houghton Mifflin Harcourt။
↑ Astana။ Collins English Dictionary။ HarperCollins။
↑ "Astana" Archived 13 May 2019 at the Wayback Machine. (US) and Astana။ Oxford Dictionaries။ Oxford University Press။
↑ Новый президент Казахстана подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан (in ru)။
↑ It's Official: Kazakh Capital Now Called Nur-Sultan (in en)။
↑ О переименовании города Астаны – столицы Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан – Официальный сайт Президента Республики Казахстан။
↑ "Astana,acity of modern structures"။
↑ "Astana, Kazakhstan: the space station in the steppes"။
↑ June 2021၊ Adelya Dauletkyzy in Tourism on 16 (2021-06-16)။ Kazakhstan Selects Top 10 Tourist Destinations (in en)။
↑ ၁၈.၀ ၁၈.၁ "Astana, Kazakhstan: the space station in the steppes"၊ 8 August 2010။
↑ Myers၊ Steven Lee။ "Kazakhstan's Futuristic Capital, Complete With Pyramid"၊ 13 October 2006။
↑ "Astana, the futuristic frontier of architecture"၊ 8 August 2010။
↑ Daisy Carrington (13 July 2012)။ Astana: The world's weirdest capital city။ CNN။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နျူ-ဆူလ်တန်မြို့&oldid=719740" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၈:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။